ကိုယ်တိုင်လည်း ဘ၀ကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းချင်တယ် တခြားသူတွေကိုလည်း ဘ၀တွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာပဲ ဖြတ်သန်းနိုင်စေချင်တာလေ
အိမ်ယာသစ်ထူထောင်ခြင်းနွယ်သာကီ (ခ) သာကီနွယ် သည် သတင...
အားလုံးသော blogs များ
ပုဂံ၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ တောင်ငူ
တင့်ကြွားဟန်ချီ၊ နွယ်သာကီ။ ။
ဇာတိပုည ၊ ဂုဏ်မာနနှင့်
တက်ကြွညီညာ ၊ ထက်သန်စွာလျှင်
စဉ်လာမညှိုး ၊ ဂုဏ်သိမ်တိုးလျက်
ကျစ်လစ်ခိုင်ကျည် ၊ နွယ်သာကီ။ ။
အာဂဇာနည်၊ နွယ်သာကီ။ ။
ထွန်းတောက် အဓွန့်ရှည်၊ နွယ်သာကီ။ ။
တို့ရွာ ဒို့တိုင်း ဒို့သမိုင်းကို
ကမ္ဘာတည်မည့် မျိုးဂုဏ်ရည်။ ။
နွယ်သာကီ (ခ) သာကီနွယ် သည် သတင်းမှန်များကိုသာ ဖေါ်ပြပါသည်။ ယခုလည်း BLOG ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖေါ်ပြရေးသားထားသော www.tharkinwe.com တွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီး ။WEB PAGE ကြီး တစ်ခုအား စတင်အခြေပြုနေသည့် အတွက် အမှားအယွင်း ၊အတိမ်းအစောင်း အနည်းငယ် ရှိသေး၍ ဖြည့်စွတ် နားလည်ပေးကြပါရန် စာဖတ်သူများအား အနှုးအညွန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Posted by ပပ၀တီ at 2:16 AM 1 comment:
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ်ကျုံပိုက်ကျေးရွာရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းပိုင် အော်တို အိတ်ချိန်းရုံး အောက်ထပ် လှေကားအနီး (၃၀-၈--၈)ရက်နေ့ ညပိုင်း ၁၁၃၀ ချိန်တွင် ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရုံးလှေခါး အနီးရှိ ရုံးခမ်း ၃ ခမ်း မှ မှန်များကွဲကျပြီး အခြားထိခိုက်မှုများ မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေရာ အနီး HighExplo Fire –TNT စာတမ်းပါ အရှည်(၁) ပေခန့်ရှိ ယမ်းထုတ် ၄ ထုတ် ၊ ဆီစိမ် စက္ကူဖြင့် ပတ်ထားသော အရှည် ၁၀ လက်မ ခန့်ရှိ ယမ်းပျော့ (၁၁)ထုတ် နှင့် ၉၁ မမ လက်ပစ်ဗုံး စနက်တံ ၂ချောင်း ၊ စနစ်တံမပါ လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံး ၊ အရှည် ၆၀ ကိုက်ရှိ နီ/မဲ ၀ါယာကြိုးရှည် တို့ကို တွေ့ရှိရမိပါတယ်။
အဆိုပါ ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပြီး ပေါက်ကွဲမှု ကြီးကြီးမားမား ပါသာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ရုံး အပြင် ရုံးအနီးဝန်းကျင်ရှိ ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိနေအိမ်များပါ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ် ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သာပေါက်ကွဲပါက သေဆုံးမည့်သူများမှာလည်း မတွေ့ဝံ့စရာပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဖျက်သမား သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ လုပ်ရပ်သည် နိုင်ငံတော် အစိုးရ ကို နိုင်ငံရေး သိက္ခာကျဆင်းစေရန် ရည်ရွယ် တိုက်ခိုက်လာခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို ပါ ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်လာသည်မှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။ ပေါက်ကွဲ မှုကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိခြင်းမှာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ ၏ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုအား အတိဒုက္ခ မရောက်ခဲံ့ခြင်း သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် သောင်းကျန်းသူများ၏ လုပ်ရပ်အား လုံးဝဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 3:49 AM 1 comment:
ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး သမားများ ပြည်တွင်း ၀င်ရောက်လာ၍ သတိထားရမည်
ABSDF မှဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးသမားများ ဖြစ်သော အောင်ကိုနိုင် (ခ) ကိုကိုနိုင် ဦးစီး အင်အား (၇)ဦးသည် ကော့ကရိတ်မြို့မှ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မော်လမြိုင်မှ တဆင့် နေပြည်တော်၌ ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း ၊၄င်းတို့အဖွဲ့သည် ၂၁-၇-၀၈ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မှ နေပြည်တော်သို့ ထွက်ခွာလာပြီး ကား/ရထားလမ်းကြောင်းများမှ ၀င်ရောက်လာနိုင်ကြောင်း၊ဒါအပြင် လူစုခွဲပြီး ဘီးလင်း ၊ကျိုက်ထို ၊ညောင်လေးပင်၊ ထန်းတပင်နှင့် တောင်ငူလမ်းကြောင်းများမှလည်း ၀င်ရောက်လာနိုင်ပါသည်။ အောင်ကိုနိုင် ကျော်သီဟ ရန်နိုင် အပါအ၀င် စုစုပေါင်း (၅)ဦးသည် ကျိုက်ထို ဘူတာတွင် ရထားလက်မှတ်ဝယ်ပြီး မုပ်ပလင်မှ ထွက်ခွာလာရာ တောင်ငူ မရောက်ခင် ကြားဘူတာ တွင် ဆင်းပြီးလမ်းဆင်းလျှောက်ကာ တောင်ငူမြို့သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း၊အဆိုပါဖေါက်ခွဲရေးသမားများသည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အခြားမြို့ကြီးများတွင် ဌာနဆို်င်ရာ ရုံးများအားဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီးယခုအခါ နေပြည်တော်သို့ ၀င်ရောက်ပြီး ဘူတာအပါအ၀င် အရေးကြီးအဆောင်အဦများ၊ လူစည်ကားရာ အရပ်များတွင် ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်းရရှိထားပါတယ်။
အောင်ကိုနိုင် ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကတော့ အသက် (၄၀)နှစ်ခန့် အရပ် (၅)ပေ ၄လက်မခန့် ၊ ဆံပင်ဂုတ်ထောက်၊ အလယ်ခွဲ၊ မျက်ခုံမွှေး ထူ/ရှည်၊ နားရွက်ကား၊မျက်နှာသွယ်ပြီး ရန်ကုန် သံလျှင်ဇာတိဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျော်သီဟ ကတော့ (၄၀)နှစ်ခန့် ဖြစ်ပြီး နှာတံပေါ်၊ မျက်နှာ လေးထောင့် မကျတကျ ဖြစ်ကာ စကားပြောနှေးသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ထွန်းဆိုသူ အခြားဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးရေးသမား တစ်ဦး ကတော့ သက်ထွန်း (၃၁)နှစ် ဖြစ်ပြီး အရပ် ၅ ပေ ၅လက်မ ခန့်ရှိပါတယ်။
၈-၈-၀၈ ရက် မတိုက်ခင် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုဆူပူမှု ဖြစ်အောင် လူထု အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင် ဒီလို ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးရေး သမားများက ဆောက်ရွက်သွားရမည် မှာ ၄င်းတို့ ၏ သမိုင်းပေးတာဝန်တစ်ရပ် ပမာ ဖြစ်နေပြီး၊ စွမ်းအားမြှင့် စစ်သည်တော်များ အဖွဲ့နှင့် ဟန်ချက်ညီစွာ ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများ ပျက်ပြားအောင် ဆောင်ရွက်သွားရမည်မှာ ၄င်းတို့ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 4:22 AM3comments:
ရန်ကုန်- ကျောက်ကြီး သွားခရီးသည် လိုင်းကား တစ်စီးဖြစ်သော ရွှေခရီး သည် မော်တော်ယဉ်လိုင်းပေါ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်  သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၁၅ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း အသံလွှ့င် အစီအစဉ်တွင် ထုတ်လွှင့်သွားရာ ၌ အဆိုပါကားသည် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အစ္စည်းပိုင် ကား ဖြစ်ကြောင်း ဒါကြောင့် သောင်းကျန်းသူများမှ ကြံ့ခိုင်ရေး ကိုရည်ရွယ်ပြီး ထပ်မံတိုက်ခိုက်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်လွှင့် သွားပါတယ်။
အမှန်တကယ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်မှန်ပါသည် ။ သို့သော် အမှန်ကနည်းနည်း ၄င်းတို့ အာဘောများကို ထည့်တာ များများ ဖြစ်သွားပါသည်။
ဆန့်ကျင်ဖက်နိုင်ငံရေး သမားများ၏ သဘောတရားများအတိုင်း မိမိ မလိုလားမနှစ်သက်သော မိမိနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သော အဖွဲ့အစည်း(သို့ မဟုတ်) လူုပုဂ္ဂိုလ်များကို အခါအခွင့် သင့်တိုင်း မကောင်း မြင် ဘက်က ကြည့်ကာ ရတုံး နှပ်ထားမှ ဆိုတဲ့ အတွေးများနဲ့ ရေးသားထုတ်လွှင့်သွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်း၏ဇစ်မြစ်ကို ထဲ့ထဲ့ဝင်ဝင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ခြင်းအလျှင်းမရှိ ၊ မိမိထင်ရာ ဇွတ်ပြောတက်သော ပြည်ပရောက်အသံလွှင့် ဌာနများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ လိုလားချက်များအတိုင်း လူထု ကို ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် ၊ လူထုကို သွေးထိုးရန် ၊လူထု ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေရန် တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ပြည်ပ နိုင်ငံကြီးများ၏ အကြိုက်ပေး အလိုက်ဆောင် ရေးသားထုတ်လွှင့်ခြင်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ရော လူထု တစ်ရပ်လုံး စည်းကမ်းရှိပြီး အေးချမ်းတည်ငြိမ် သော ဒီမိုကရေစီ ရရှိ ရေး အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြည်တွင်းတွင်ပါဝင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိ၊ ပြည်ပနိုင်ငံကြီးများရဲ့ အောထက်အပံ့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အရယူပြီး ရုပ်ပြနိုင်ငံရေး လုပ်စားနေခြင်းမျှသာ ရှိပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲဖြစ်စဉ်တွင် မော်တော်ယာဉ်အမှတ် ၅ခ/ ၃၆၄၄ ၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦး ဆန်နီဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး မဟုတ်ပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်လည်း လားလားမျှ မသက်ဆိုင်ပါ။ ၄င်း၏ခယ်မတစ်ဦး ဖြစ်သူ မသန်းသန်းအေး သည်သာ ယခင်လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်ခန့် က ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဗုံးပေါက်ကွဲသည့် ကားနှင့် လားလားမျှ မဆိုင်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများအား ယုံကြည်ပြီး နားထောင်ပါက လွဲမှားသော အမြင်များကို မြောက်မြားစွာရရှိနိုင်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 2:51 AM No comments:
ပေါက်ပြန်ပြီ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်က ဗုံး
မြို့ကျောင်း-ဖဒို-ရန်ကုန် အပြင်ရန်ကုန်- ကျောက်ကြီး ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်များပေါ်တွင် မကြာခဏဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ကျောက်ကြီး ဟိုမှာဖက် သံဘို၊ ဘော်စဲခို၊ ပလက်ခို ၊ စောမူပလော၊ လွယ်မူပလော စသည့်ဖြင့် အနက်ရောင် ဧရိယာများအတွင်း ကရင်အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ ခိုအောင်လှု့ပ်ရှားနေပြီး ၊ ၄င်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသော ပြည်တွင်း အဖျက်အမှောက်လုပ်ရပ်များကို ဒိုင်ခံလုပ်နေသော ကျောင်းသားတပ် အမည် ခံ ပြည်ပရောက် တေလေဂျပိုးများ မှ မိမိလူမျိုးခြင်းမစာနာ၊ လူသားခြင်းမစာနာ၊ မိမိ ဆွေမျိုး မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်း မဟုတ်ရင်ပြီးရော ကွဲခြင်ရာ ကွဲ၊ သေချင်ရာ သေကြပါစေ။ ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး လုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ကိုင်နေတာဟာ မကောင်းပါဘူး။
မြို့ကျောင်း-ဖဒို-ရန်ကုန် ပြေးဆွဲနေသော “ ရွှေခရီးသည် ” မော်တော်ယာဉ် ပေါ်တွင်ခရီးသွားလုပ်သားပြည်သူ ကျား(၁၄) ဦး မ(၂၁)ဦး စီးနင်းလိုက်ပါလာသော ခရီးသည် တင်ကားပေါ်မှာ ချိန်ကိုက်မိုင်း တင်ပြီး လွှတ်လိုက်တာ ဒီနေ့ မနက် (၈)နာရီ (၀၈ဇူ၁၄ ၀၈၀၀)ချိန်မှာ ၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကောလိယ တံတား ထိပ် အရောက် မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်းနေစဉ် အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် (၁)ဦးသေပြီး (၁)ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။သေဆုံးသူက တော့ဦးခန့်(ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရှေ့နေ)၊ဘောဂလမ်း၊ကွင်းနောက်ရပ်ကွက်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီ ၄င်း၏ထိုင်ခုံအောက်တည့်တည့်မှ ပေါက်ကွဲခဲ့ တဲ့ အတွက်ကြောင့် အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကျွေမွသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာ ရသူကတော့ ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (၆၅)ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဦးပါပါ
ကိုင်း ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးသွင်းလာပြီးလည်း စွမ်းအားမြှင့် စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ရယ်။
တိုက်ရဲခိုက်ရဲ သတ္တိများရှိပါက တပ်မတော် စစ်စခန်းများကို တိုက်ခိုက်သင့်ပါတယ်။ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများကလည်း လာရောက် တိုက်ခိုက်မည် ဆိုပါက warmly welcome ပါ။ အခုတော့ ဗျာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို လုပ်ရက်လေခြင်း။
Posted by ပပ၀တီ at 12:17 AM No comments:
ကလေးများ ပညာရေးတိုးတက်ရေးသည် အဓိကပါ။
နာသုံးနာကို အခြေခံသော အနန္တဂိုဏ်းဝင်
ဒုက္ခ မှ သုခ တက်လှမ်းနိုင်ရေး သည် ပညာရေးသာ ဖြစ်သည်။
ပညာရေးသာ အဓိကပါ တို့ကျိုးစားမှာ
မိုးလေ တွေ့ တို့မမှု တဲ့ ရွာလယ် က ကျောင်း
Posted by ပပ၀တီ at 1:25 AM 1 comment:
လူငယ်များ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် နာဂစ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိလာစဉ်
တပ်မတော်နှင့် အတူ လက်တွဲ၍ ထမ်းဆောင်ရမည်မှာ လူငယ်များရဲ့တာဝန်
ွှ အဓိက က ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ၀မ်းစာအတွက် ဖူလုံပြီး
Posted by ပပ၀တီ at 12:15 AM No comments:
“ ၀သန်ကာလ ”
ပျော်ပျော်ပါးပါး။ မယားနှင့် ဆွေငယ်လင်
လက်တွဲငယ်ခြေငင်၊ ကိုယ်တွင် အ၀တ်
ပုဆိုး အင်္ကျင်္ီ ၊ စုတ်ပြဲပြီး။
ချည်နီပေါင်း တွတ်တွတ်ကယ်နှင့် လေး။
မိုးရေစွတ်လို့ ၊အ၀တ်ကယ် မပါ
သားသမီး ကို၊ ကိုယ့်ထီးပွေ့လိုသာ
ဆူးပုတ်ကယ် ကင်းပုံ၊ အလုံးစုံ
ဖူးငုံသာရော၍ ပြွန်းသည်နှင့် လေး။
၀င်းဖေ ( မြကန်သာ )
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုနောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရေဘေးသင့်ဒေသများ အတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိက တာဝန်အရှိဆုံး သူမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ပင် ဖြစ်ပေသည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်ပြီး ၂ ရက်အကြာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ် စာနာ သနားသော နိုင်ငံ တကာသည် နာဂစ်မုန်တိုင်း အလွန် ၂ လကြာလာသောအခါ သတိရခြင်းမရှိတော့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ထက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စား စွာ အာရုံ စိုက်လာစရာ နိုင်ငံတကာ အရေး များ ပေါ်ပေါက်လာသော အခါ မြန်မာနိုင်ငံ ၏နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေသော သတင်းများသည် ကမ္ဘာ့သတင်း စာမျက်နှာများပေါ်မှ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် နေလုဖြစ်နေပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်နိုင်ငံရေး အုပ်စုများမှလည်း နာဂစ် ဒေသများအတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်မှုများထဲမှ အားသာချက်များကို ဖေါ်ကျူးခြင်း စိုးစေ့မျှ မရှိဘဲ ဘယ်လို့ အပြစ်ပြောရမလဲ ဆိုတာ ချောင်းပြီး အပြစ်ရှာကြံကာ အပြစ်ဖို့ယုံသာရှိပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို လူသားခြင်းစာနာကာ မြန်မာနိုင်ငံသားခြင်း စာနာကာ ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းများ မရှိပါ။
တကယ်တော့ မြန်မာများ၏အရေးသည် မြန်မာ့အရေး ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူတွေ ကမည်၍ မည်မျှ ကူညီမည် ဟုပြောနေစေကာ မူ၊ မိုးပေါ်မှကျလာမည့် ကျောက်သံပတ္တမြား မိုးမျုားကို မျှော်လင့် နေမည့် အစား ကိုယ်ခြေကိုယ်အားကိုး ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ကာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေး အတွက် မိမိ တို့ လူမျိုးအချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကူညီနေသော အထောက်အပံ့များနှင့် နိုင်ငံတော် ၏ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုများကို အမှီပြုပြီ လုပ်ကိုင်ရမည်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းသားများ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သော အတိတ်ကို ပြန်လည် ပူဆွေး သောက ရောက်နေမည်အစား ဘ၀အသစ်အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့သောသူများ အနေဖြင့် မိမိလုပ်ကိုင်စရာရှိသည်များကို ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ရင်း ဘ၀သစ်များ ပြန်လည် စတင်ရန် အချိန်တန်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ မှ လေဘေးသင့်ဒေသများအတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လက်တွန်းထွန်စက် အစီးရေ(၃၀၀၀)ကျော်နှင့် မျိုးစပါးတင်း ပေါင်း သောင်းချီပြီး ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒေသတွင်း တောင်သူလယ်သမားများအား လယ်ယာထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရေး အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီး လက်တွန်းထွန်စက်များ မောင်းနှင် သော ၀န်ထမ်းများကို အဆိုပါ လေဘေးသင့် ဒေသများသို့ စေလွှတ် ပြီး ကူညီလုပ်ကိုင်စေပါတယ်။ ဒါအပြင် နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များ မှဝန်ထမ်းများအပါအ၀င် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ဝင်များကပါ အဆိုပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ အကူအညီ အထောက်အပံ့များကို မျှော်ကိုးနေမည် အစား မိမိပြည်တွင်းမှ အားများကို ရယူပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ထူမှ ကိုယ်ထ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ ၀င်းဖေ( မြကန်သာ) ရဲ့ ကဗျာလေးထဲ ကအတိုင်း အတိတ်က အရိပ်မဲကြီး ကို ဖျောက်ဖျက်ပြီး လယ်ယာလုပ်ခွင်အတွင်း လုပ်စရာ ရှိတဲ့ အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နေခြင်းအားဖြင့် မိမိ မိသားစု ၊ မိမိဒေသ ၊မိမိနိုင်ငံ အတွက်အလုပ်အကြွေးပြုသင့်ပါကြောင်း နှင့် အိမ်မက်များ ကို မျှော်လင့် စောင့်စားနေခြင်း မှ ကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 3:38 AM 1 comment:
Peacefully transitional period of Myanmar
Peacefully transitional period is the necessary of Myanmar politic. We can talk about in this matter ,we heard so many comments on the cause not only spdc but also other exile groups. The situations of Myanmar politic were not as bad as some countries , for example Zimbabwe, Pakistanis.
We can see the National Convention Sights and scences of Nyaungghnapin Camp that is for the people , by the people for Myanmar Democracy. So many representatives of national races attended to NC, decided to pass Peacefully transitional period with all national races.
National Convention (Kyaikkasan)
The National Convention was launched on9January 1993. At the first day session, those responsible made clarifications to the six objectives of the National Convention, procedures to hold the National Convention, chapter headings that should be discussed to lay down fundamental principles to be included in the State constitution. Then, the National Convention was adjourned from 12 January 1993 till 31 January 1993.
The National Convention resumed on 1 February 1993. The National Convention delegates selected members of the panel of chairmen of the National Convention for respective delegate groups, and held discussions to designate chapter headings for the State constitution. At the plenary sessions, respective delegate groups submitted headings chapter-wise. The panel of
chairmen then collected the submitted points into 20 different chapter headings and submitted them to the sessions.
Based on the 20 headings, the National Convention chose and arranged 15 chapter headings in order. In accordance with the consent of the delegates, the National Convention was adjourned from 8 April 1993 to6June 1993.
On7June 1993, the National Convention resumed. The points proposed for the Chapter “Fundamental Principles” were discussed group-wise, and proposal papers on fundamental principles were submitted to the sessions, accompanied by assessment of the panel of alternate chairmen.
The National Convention Convening Work Committee weighed the submissions and submitted 104 points to be included in the constitution to the National Convention Convening Commission for its approval. The National Convention was adjourned from 17 September 1993 to 17 January 1994.
The National Convention resumed on 28 November 1995. The representatives of the National League for Democracy walked out of the convention under the pretext that the introductory speech of the Chairman of the National Convention Convening Commission did not include any response to the party regard ing its proposal foradialogue. The work committees for Convening the National Convention removed 86 NLD representatives, who were absent from the
convention without permission, as delegates to the
Then, the National Convention laid down detailed basic principles for the Chapters “Formation of Legislation”, “Formation of Executive” and “Formation of Judiciary”. The National Convention was adjourned beginning 31 March 1996.
National Convention (Nyaunghnapin)
The National Convention was reconvened on 17 May 2004. The National Convention Convening Work Committee made clarifications on procedures of the convention, fundamental principles and detailed basic principles already laid down, and formation of legislative bodies at different levels. Discussions were held to adopt the detailed basic principles for sharing of legislative power. The National Convention was adjourned on9July 2004.
On 17 February 2005, the National Convention resumed and adopted the detailed basic principles for delegation of legislative power. Then, discussions were held to adopt the detailed basic principles for sharing of executive power and judicial power. The National Convention was adjourned on 31 March 2005.
On5December 2005, the National Convention State constitution. A referendum will be held after the Committee for Drawing the State Constitution completes the drawing of the State constitution according to the principles adopted through the collective
discussions of the delegates of all national races. So,
after you delegates get home you can makeasatisfactory explanation about the principles if your friends and acquaintances ask questions”.
Brief historical background of National Convention
For ensuring the emergence ofaState constitution much-needed in Myanmar, before the National Convention started, all the representatives including representatives of the political parties, and representatives-elect held preliminary meetings and designated the delegate groups, the number of the delegates and procedures of the National Convention with common consent.
Therefore, the Chapter Headings and their Serial Order, and State Fundamental Principles for the State Constitution were laid down in 1993.
The Chapters “The State Structure” and “The Head of State” were laid down in 1994. Detailed basic principles were laid down for designating Self-Administered Divisions and Self-Administered Zones were designated in 1995, and Formation of Legislature, Formation of Executive and Formation of Judiciary” in 1996.
The National Convention, which had to be adjourned temporarily since 1996 due to various reasons, resumed on 17 May 2004. Up to that time, the
National Convention had been held for four times.
Owing to the sustained tenancious efforts of the delegates, the fundamental principles and detailed basic principles were laid down for the State Constitution and consequently adopted successfully for one heading after another.
Regarding the accomplishment of the work of the 15 chapters laid down at the National Convention the Plenary Session held on7April 1993 for framing the State Constitution, eight chapters had been adopted successfully owing to the collaborative efforts of the delegates.
At the plenary sessions held from 10 to 12 October 2006, explanation was made to the delegates to give advice and make suggestions to decide whether the findings of the Work Committee Chairman for the Chapters “Election”, “Political Parties” and “Provisions on State of Emergency” of the remaining chapters should be adopted as detailed basic principles or not.
Likewise, at the plenary sessions held from 10 to 13 November 2006, clarification was made to the delegates to give advice and make suggestions to decide whether the findings of the Work Committee Chairman for the Chapters “Amendment of the State Constitution”, “State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital”, “Transitory Provisions” and “General Provisions” of the remaining seven chapters should be adopted as detailed basic principles or not.
At the time, the detailed basic principles for the eight of the 15 chapters to be included in the State Constitution had been adopted. And to adopt the detailed basic principles for the seven remaining chapters, respective delegate groups had presented the proposals of the delegates at the plenary session held from 27 November to7December and at the plenary session held from 21 to 29 December.
At that time, all the National Convention Convening Work Committee had presented all the chapter headings to the delegates to seek their advice and suggestions. So, we, delegates, were proud of that achievement.
At the plenary sessions of the National Convention, the panel of chairmen would have to compileaproposal paper after reviewing the suggestions the delegate groups had discussed and submitted. Then, the National Convention Convening Commission and the Work Committee would have to assess the proposal paper and lay down detailed basic principles after seeking approval of the delegates at the next plenary session of the National Convention. The speech was delivered by Chairman of the National Convention Convening Commission General Thein Sein on 29
December 2006. So, we knew that the National
Convention would resume on an appropriate time in 2007.
Anyhow, we, National Convention delegates will have to shoulder national political duties necessary for the State, and createaprosperous future of the nation in harness with younger generations. At the National Convention, delegates held discussions for emergence ofanew enduring State constitution.
According to the historic lessons, the State constitution serves as the life-blood of the State. And the drafting of the State constitution is of great importance and deservesaserious attention. I recognize that putting aside the personal affairs, National Convention delegates made earnest efforts in collaboration in the interests of the nation and the people.
Taungdwin Bo Thein "
We should like to read this book '' The National Convention Sights and scences of Nyaungghnapin Camp '' is written in english by author Taungdwin Bo Thein. it is only the preface of this book and continually reveal , if i 've spare time,i will be post .
Posted by ပပ၀တီ at 4:22 AM No comments:
Posted by ပပ၀တီ at 5:54 AM No comments:
ရေဘေး မှ မလွတ်ကင်းသေးသော ဧရာဝတီ
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုနောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်း ရေယာဉ် နစ်မြုပ်မှုများ ၂ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ တစ်ကြိမ်ကတော့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ဘိုကလေး မြို့နယ်မှ လေဘေးသင့် ပြည်သူလူထု များ မိမိနေရပ်ကျေးရွာများသို့ ပြန်အပို့ ဘိုကလေးမြို့အထွက် လေပြင်းမိပြီး ရေယာဉ် လေးစီးသည် ကိုင်းတောဝနှင့် ကန်တရာ ဆိပ်အနီး ညနေပိုင်း ၄နာရီလောက်မှာ နစ်မြုပ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၃၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ယခုတဖန် မြောင်းမြမြို့နယ်အကိတ်ကြီးကျေးရွာမှ ကျေးရွာ ရယက ဥက္ကဌ ဦးမော်လင်း မောင်းနှင်းသော စက်လှေ ဖြင့် ကျေးရွာ မှ တောင်သူ လယ်သမား ၇၀ ဦးခန့် ဟာ မနက်စောစော ၄ နာရီလောက်မှာ မြောင်းမြမြို့ မှ စိုက်ပျိ်ုးစရိတ် ချေးငွေများ သွားရောက်ထုတ်ယူရန် စိးနင်းလိုက်ပါလာစဉ် ရွေးမြစ်အတွင်း ၌ မနက် ၄ နာရီ ခွဲလောက်မှ စက်လှေထဲ ရေ၀င်ပြီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဘဲ စက်လှေနစ်မြုပ်သွား ပါတယ်။ ရေယာဉ် နစ်မြုပ်မှုကြောင့် နေခင်း (၁၃၃၀)ချိန် အထိ ရေနစ်သေဆုံးသူ အလောင်း(၉)လောင်း ရှိပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူ (၂၀)ဦး ရှိပါတယ်။ ကျန်လူများကတော့ ရေနစ်မြုပ်မှုမှ လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 12:07 AM No comments:
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ရုံးအတွင်း ယနေ့ ၀၆၃၀ချိန်တွင် ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူထိခိုက်မှုမရှိသောလည်း အဆောက်အဦး အောက်ထပ် အုတ်နံရံပြိုကျပျက်ဆီး သွားပြီး အောက်ထပ်ရုံးခန်း အတွင်းရှိ စားပွဲ ၃ လုံး ကုလားထိုင် ၇ လုံး ဘီဒို ၂ လုံး တီဗွီ ၁ လုံး တံခါးမကြီး တစ်ချပ် ပြတင်းပေါက် ၄ပေါက်တွဲ ၂ ချပ် ၊ အပေါ်ကြမ်းခင်း ကွာကျ သွားကြောင်းနှင့် လူထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း လင်းအာရုံ စောစော ကြီးပိုင်း မိုးရွာအားကောင်းနေ စဉ် အစောင့် ကိုစန်းဝင်း သည် က ရုံးရှေ့ စိုက်ခင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နေပြီး မောမောနှင့် အပေါ်ထပ် တွင် အိပ်ပျော်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ မီးကလည်း ပျက် နေတော့ ရုံးအနောက်ဖက် ပြတင်းပေါက်က ၀င်လာတာကို မသိလိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူထိခိုက်မှုမရှိသော်လည်း ရုံးဝန်ထမ်းများ ပေါ့ဆ မှုကြောင့် နိုင်ငံရေး သိက္ခာကျဆင်း ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 10:05 PM 1 comment:
သတင်းမှန်သည် သို့သော် ပုံကြီးအလွန်မချဲ့သင့်
ပဲခူးတိုင်း အရှေ့ပိုင်း ဒိုက်ဦး မြို့နယ်အတွင်း ရာသီစာများ ကို စားသောက်နေသော မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ကျော်စိုးမိုး နှင့် လိုင်းမန်း ကျော်လှ တို့ ၂ ဦး သည် ဆိုင်ကယ်များကိုယ်စီ စီနင်းပြီး ဒိုက်ဦး မြို့နယ်အတွင် ကြိုးဖုန်း များ အလုံး ၂၀၀ ချပေးမည့် အကြောင်း အဆိုပါဖုန်းများကို လိုင်းကြေး ၇ သိန်း ကြိုတင်ပေးရန် အတွက် တယ်လီဖုန်းလျှောက်ထားသူ ၂၀ ဦး ထံမှ ကောက်ခံသွားကြောင်း သိရပါတယ် ။ငွေကြေး တက်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး သမားများ အများဆုံး ရသွားပါတယ်။ ၀န်ထမ်း အခြင်းခြင်းတောင် ငွေ ၇ သိန်း မရက မလုပ်ပေးပါ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်း ငွေ၇ သိန်းကြိုတင်ပေးရင် ရမယ် ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ငွေ ၇ သိန်း ကြိုတင်ပေးရင် ရမယ်။ ဘယ်ဝန်ထမ်းမဆို ငွေကြိုတင်ပေးမှ လုပ်ပေးနိုင်မယ်တဲ့ ၊ စီးပွားရေး သမား များကတော့ ငွေ ၇ သိန်းဆိုတာ မပြောပလောက်ပေမယ့် သာမာန် အစိုးရ ၀န်ထမ်းများ အနေနဲ့ ကတော့ ငွေ ၇ သိန်းဆိုတာ ၁၀ လ စာလောက်ရှိပါတယ်။ကြို ဖုန်းတွေလည်း ချပေးရော လက်ရှိ ၀န်ထမ်းအများ စုနဲ့ အငြိမ်း စား ၀န်ထမ်းအများစု ကြားမှာ ရော ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ ကြားရော လှုပ်လှုပ်လှုပ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၆ -၆-၀၈ ရက်နေ့မှာ ဆက်သွယ်ရေး ရုံးရှေ့တွင် မြို့ခံလူတွေ ဆူဆူညံ့ညံ့ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပိုက်ဆံ ၇ သိန်း ကောက်သွားတဲ့ ကျော်စိုးမိုး နဲ့ ကျော်လှ တို့ ကို မကျေနပ်ကြလို့ပါ။ ခြစားနေတဲ့ ၀န်ထမ်းများကြောင့် လူထုမှ အခက်အခဲ တွေ့သော်လည်း RFA သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကြီးကျယ်ခန်းနား စွာ မဖြစ်ပါ ။ အများဆုံးမကျေနပ်သူများက ပိုက်ဆံ ၇ သိန်း ကြိုတင် မပေးနိုင်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများမှ လိုက်ထားတဲ့သူများ မကျေနပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လွဲမှားစွာ လူထုနှင့် အခြားတစ်ဖက်ကို ရန်တိုက်ပေး တက်သော RFA လေသံများ အတိုင်း ပုံကြီးချဲ့ ရေးသားထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ပပ၀တီ at 3:07 AM5comments:
ကိုယ်ထူမှ ကိုယ်ထ ရမည့် ဧရာဝတီ
အရှေ့မြောက်ရာသီလေ ဆုတ်ခွာချိန်၊ အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေ အ၀င် ဟန်ချက်ညီစွာ လှုပ်ရှားမှု မရှိတော့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင် အတွင်း လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မုတ်သုန် အ၀င် မေလ တိုင်းမှာ အနည်းနှင့် အများ မုန်တိုင်း ငယ်လေးများ တိုက်ခိုက်တက်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တော့ မေလ ဆိုရင် သတိထားနေထိုင်ရပါတယ်။ ဒီတနှစ် မေလ ကတော့ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ နာကျင်စေခဲ့ပါတယ်။ မုန်တိုင်းလွန်သော တစ်လ အကြာမှာ ပြည်တွင်းမှ အလှူရှင်များ၊ ပြည်ပ မှ အလှူရှင်များ ပြည်တွင်းမှ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ အစရှိသည့် ငွေကြေးတက်နိုင်သူများအနေဖြင့် သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်းများ ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုက်ခိုက်သွားသော နာဂစ်မုန်တိုင်း ပြီးနောက် တစ်လ အကြာတွင် နိုင်ငံခြား အကူအညီများသည် လျော့ပါးသွားပြီး ကနဦး ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ တောင် ပြည့်မှီခြင်းမရှိတော့ပါ။ ဒါကြောင့် ပြည်ပ အားကိုး ပြီး နေလို့ မရပါ။ မိမိပြည်တွင်းအားကိုသာ အားကိုး သွားကာ ကိုယ်ထူမှ ကိုယ်ထရမည့် အခြေအနေသာ ရှိတော့ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Posted by ပပ၀တီ at 1:04 AM9comments: